Etu esi etinye Anaconda na VPS nzọụkwụ site na ụzọ dị mfe | Site na Linux
Etu esi etinye Anaconda na VPS
Isaac | | GNU / Linux, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na Python amalitela ịchọpụta Ọrụ Anaconda. Ọ bụ nkesa a na-ekesa n'efu ma na-emeghe nke asụsụ Python na R. A na-ejikwa ya na sayensị data na mmụta igwe. Ya mere, enwere ike ịhazi nnukwu ihe ọmụma maka nyocha ngwa ngwa.
Ọ dị oke mma mfe iji wụnye, na-agba ọsọ ma melite, yana dakọtara na ọrụ dị mkpa dị ka Tensorflow. Ọfọn, na nkuzi a, aga m egosi gị otu ị ga - esi mepụta igwe ojii VPS iji wụnye Anaconda ebe ahụ ...
1 Kedu ihe bụ Nkesa Anaconda?
2 Atụmatụ Anaconda Nkesa
3 Kedu ihe bụ VPS?
4 Wụnye Anaconda site na nkwụsị
4.1 Mepụta akaụntụ Clouding ma kwadebe ikpo okwu VPS
4.2 Wụnye Anaconda
Kedu ihe bụ Nkesa Anaconda?
Anaconda abụghị naanị ihe mepere emepe, n'okpuru ikikere BSD, nke nwere ọtụtụ ngwa na ọba akwụkwọ maka data sayensị na mmemme mmemme dika Python. Nkesa a nke usoro mmemme ama ama na - arụ ọrụ dịka njikwa gburugburu, onye nchịkọta ngwugwu ma nwee nnukwu ederede ọtụtụ narị nchịkọta.
N'ime nkesa Anaconda ị nwere ike ịchọta ngọngọ anọ:
Anaconda Navigator (GUI maka njikwa ya dị mfe na nghọta).
Ọba akwụkwọ maka sayensị data.
Conda (iwu maka njikwa CLI)
Ha niile ga-arụnyere na akpaghị aka na ntinye nke ngwugwu, dika m ga egosiputa nzọụkwụ site na ozo.
Atụmatụ Anaconda Nkesa
Nkesa Anaconda nwere atụmatụ dị mma na-eme ka ọ dị oke mkpa na ụwa nke nyocha data. Ndị kachasị ama bụ:
Ọ dabereghị na ụlọ ọrụ ọ bụla, ebe ọ bụ na ndị obodo na-elekọta ya ma na-emeghe oghere, yana n'efu.
Ọ bụ ikpo okwu, yabụ ọ nwere ike ịrụ ọrụ na GNU / Linux, macOS na Windows.
Ọ dị mfe, na-enwe ike ịwụnye ma jikwaa nchịkọta na gburugburu maka data sayensị naanị na ngwa ngwa.
Ọtụtụ ọrụ sayensị na-eji ya, ya mere enwere ntụkwasị obi kpam kpam.
O juputara na ngwa bara uru iji mee ka oru gi di nfe, obuna maka imuta ihe igwe.
Ọ dakọtara na ndị na-ekiri data dịka Matplotlib, Datashader, Bokeh, Holoviews, wdg.
Nlekọta dị elu ma dị ike, yana enwere ike ịnweta akụrụngwa maka mmụta igwe dị elu.
Gaghị enwe nsogbu na ịdabere na ngwugwu yana njikwa ụdị.
Mepụta ma kesaa dọkụmentị nwere koodu mkpokọta ndụ, nha anya, nkọwa na nkọwapụta.
Nwere ike ikpokọta koodu ntinye Python na igwe ọ bụla maka ime ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ọ ga-akwado ederede nke ihe ndị yiri ya na algọridim.
Na-akwado elu arụmọrụ Mgbakọ.
Ihe omume na Anaconda bụ obere, n'ihi ya enwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ tinye ya na nyiwe ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ VPS?
Agbanyeghị na ịnwere ike wụnye Anaconda Distribution na PC dị, ma ọ bụ sava gị, na nkuzi a, anyị ga-egosi gị otu esi eme ya ihe nkesa VPS, ebe ọ bụ na ọ nwere ọtụtụ uru, dị ka nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ijikwa ya, nnukwu bandwidth, scalability, nnweta dị elu, na ego dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere nhọrọ nke ịnwe sava gị.
Maka obere ụgwọ ndenye aha, ịnwere ike ịnwe ọrụ VPS (Mebere Onwe Server), nke ahụ bụ, ihe nkesa na nzuzo nke mebere. N'okwu a, m ga-adabere na igwe ojii maka nkuzi ahụ. Ya mere, ọ dị mma ịsị na VPS a bụ isi "akụkụ" raara onwe ya nye naanị maka gị nke data data nke onye na-eweta ọrụ a. N'ime ya ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ, dị ka ịwụnye ihe nkesa Linux na ọtụtụ ngwa. N'okwu a, anyị ga-arụnye Anaconda.
VPS a ga-arụ ọrụ dị ka igwe kwụ ọtọNke ahụ bụ, ya na RAM nke ya, ya na ebe nchekwa ya na SSDs ngwa ngwa, yana usoro nkewapụtara CPU cores, yana sistemụ arụmọrụ.
You gaghị echegbu onwe gị maka ijikwa ngwaike data data gị, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ike ma ọ bụ ụgwọ brọdband maka ịnwe sava, hapụ ya ụgwọ akụrụngwa dị mkpa...
Wụnye Anaconda nzọụkwụ site na nzọụkwụ
Ọrụ ahọrọ, dịka m kwuru, bụ Igwe ojii.io, nke m ga-eke ihe atụ ma ọ bụ VPS na GNU / Linux sistemụ arụmọrụ na nke wụnye Anaconda n'ụzọ dị mfe. N'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite site na sayensị data na nkwa ndị onye ọrụ a nyere, ebe ọ nwere nkwado 24/7 na Spanish ma ọ bụrụ na ihe emee, ebe data ya dị na Barcelona, ​​ya mere, n'okpuru iwu nchekwa data European. N'ihi ya na-ezere GAFAM / BATX, ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa n'oge ndị a ...
Mepụta akaụntụ Clouding ma dozie ikpo okwu VPS
Tupu anyị amalite, ihe mbụ bụ nweta ọrụ ojii. Nwere ike ịnweta ya na ya ukara website na-ahọrọ ọnụego na kasị mma suut gị mkpa. Ọnụ ọgụgụ ndị a dị iche na ego RAM, nchekwa SSD, na CPU vCores ị ga-enwe na mkpofu gị maka VPS gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ihe ọnụego ndị a na-enye, ị nwere nhọrọ nke ịhazi ihe nkesa omenala.
N'ịbụ oru nyocha data sayensị, ọ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ị nwere nke kachasị ukwuu compute arụmọrụ enwere ike, yana ezigbo RAM. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị ga-eji ya maka ọrụ ndị ọzọ dị nwayọ, ọ gaghị adị mkpa nke ukwuu ...
Ozugbo ị debanyere aha ma soro usoro nke ọkachamara ahụ, yana ịlele adreesị ozi-e gị, ị ga-enwe ike ịnweta panel gị. Maka nke ahụ, ịkwesịrị banye in Clouding:
Are banyela n’ozi a, ị ga-ahụkwa ya kensinammuo akara obubọk. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịmepụta ihe atụ ma ọ bụ ihe nkesa VPS, ị ga-pịa Pịa ebe a iji mepụta ihe nkesa mbụ gị:
Nke a na-ewetara gị na nhazi ihuenyo nke ihe nkesa VPS gị. Ihe mbu ị ga - ahụ bụ nhọrọ itinye aha ịchọrọ VPS gị. Mgbe ahụ ụdị sistemụ ịchọrọ ịwụnye. Nwere ike ịhọrọ n'etiti Windows ma ọ bụ Linux, na n'ime ngalaba Linux enwere ọtụtụ distros dị. Na nke a, ahọpụtarala m Ubuntu Server 20.04, mana ị nwere ike ịhọrọ nke ịchọrọ:
Ozugbo ịmechara, gbadaa n'otu ibe ahụ ma ị ga - ahụ nhọrọ ndị ọzọ iji họrọ akụrụngwa ngwaike: Ikike RAM, ikike nchekwa SSD, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke cores CPU ị ga-ekenye VPS gị. Buru n'uche na ị nwere ike ijikwa ha dịka ịchọrọ, ọbụlagodi na ịchọrọ ịmepụta ọtụtụ VPS ma kesaa ha n'etiti ha ... Ma, cheta, ị nwere ike iji atụmatụ dị elu karịa mgbe niile, ọ bụrụ na ịchọrọ ya.
I nwekwara nhọrọ ị hazi Firewall ma ọ bụ maka nkwado ndabere. Na ụkpụrụ, ọ dịghị mkpa ka ị metụ nke ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụrụ na ị nwere mmasị ọ bụla iji melite nchekwa, gaa n'ihu. Ihe dị mkpa bụ ike na aha SSH isi. Ekele ya, ịnwere ike ịnweta ebe dị anya iji jikwaa VPS gị n’agaghị ajụ paswọọdụ gị oge ọ bụla.
Nyochaa na ihe niile dị mma na pịa Eviar. Nke ahụ ga-akpọrọ gị na ihuenyo ọzọ ebe VPS gị gosipụtara. Na ọkwa ị ga-ahụ na ọ ka na-etinye ma na-ahazi onwe ya. Ma echegbula, a na-eme ya ngwa ngwa:
N’oge ole na ole ị ga - ahụ na ọ gwụla ma ọkwa ọkwa ga - apụta dị ka Ọrụ. N'oge ahụ, ịnwere ike iji sistemụ arụmọrụ gị wụnye ihe ịchọrọ (na nke a Anaconda).
Pịa na aha na ị tinyela na VPS gị ma ọ na-emegharị gị gaa na ibe ọzọ na nchịkọta nke ozi nke ihe nkesa ebe ị ga-etinye Anaconda:
N'ihi ya, ihe dị mkpa bụ mpaghara a na-akpọ Otu esi enweta ihe nkesa ahụ. Nke a bụ ebe ozi ịchọrọ maka ịnweta bụ, IP nke VPS, dị ka paswọọdụ, onye ọrụ (mgbọrọgwụ) ma ọ bụ igodo SSH iji budata.
Site na data ndị a niile, yana IP nkesa, mgbọrọgwụ na paswọọdụ ị nwere ike ịnweta ugbu a iji gaa n'ihu na ntinye nke Anaconda ...
Ugbu a ihe niile dị njikere maka Ntinye Anaconda na VPS. Maka nke ahụ, ị ​​nwere ike ịga weebụsaịtị ha Iji gụọ ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ahụ ma ọ bụ lelee ụdị kachasị ọhụrụ dị.
Iji malite, ị ghaghị nweta ihe nkesa VPS gị site na SSH. N'ụzọ ahụ, site na distro mpaghara gị, ịnwere ike ịwụnye ihe niile ịchọrọ na sava ahụ. Ọ ga-adị mfe dị ka ịmepe ọnụ gị na ịpị iwu na-esonụ (cheta iji dochie gịipdelserver na IP nke VPS nke ị hụrụ na mbụ na Clouding):
Na-aga ịjụ gị paswọọdụ, bee nke Clouding gosiri gi na mado. Nke ahụ ga-enye gị ohere. Ga-ahụ na ozugbo nke ọnụ gị agbanweela, ọ bụghịzi mpaghara nke onye ọrụ gị, mana ugbu a ọ bụ nke igwe dịpụrụ adịpụ. Ya mere, a ga-egbu iwu niile ị pịnyere ebe ahụ na sava VPS.
Ugbu a ị nwere ohere, ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịmalite ibudata ma wụnye Anaconda soro iwu ndị a iji weta ya na ndekọ aha nwa oge ma nweta nsụgharị ahụ sitere na ọdụ gọọmentị:
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-enwe Anaconda, ihe ndị a bụ nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke nbudata data site na iji nchikota SHA-256. Maka nke ahụ, na-agba ọsọ iwu na-esonụ:
Y ga-eweghachi a hash na nlele.
Ugbu a, ị ga- malite Anaconda na iwu na-esonụ:
Nke a ga - akpọrọ gị na ozi na - arịọ gị ka ịpinye ENTER na aka ya ọ ga - akpọrọ gị na nkwekọrịta ikikere Ananconda. Nwere ike ịga na njedebe site na ịpị Intro o ga aju gi ma ichoro iza ee ma obu ee e. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị nabata ọnọdụ ndị ahụ ma ọ bụ. Pịnye "ee" na-enweghị nkwupute wee pịa Tinye. Ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ:
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ebe nwụnye. Pịa Tinye maka ụzọ egosiri na ndabara ma ọ bụ tinye ụzọ dị iche ma ọ bụrụ na ịchọrọ ... Ugbu a ntinye nke Anaconda dị ka ndị dị otú ahụ ga-amalite. Ọ ga-ewe obere oge.
Mgbe usoro a agwụla, ị ga-enweta ozi dị ka nke na-esonụ, na-egosi na o mechara nke ọma:
.Dị ee ibido conda. Ugbu a ọ ga-eweghachi gị ozugbo nke VPS gị. Have nwere ihe ọzọ fọdụrụ tupu ị nwee ike iji conda, nke ahụ bụ iji rụọ ọrụ nwụnye na:
Ma ugbu a, ị nwere ike jiri conda ma bido inye Anaconda bara uru ... Iji maatụ, ị ga - ahụ enyemaka na nhọrọ ma depụta ngwungwu ndị dịnụ n’otu n’otu na:
Ọbụna ịtọ ntọala gburugburu ebe obibi maka Anaconda jiri Python3, ọmụmaatụ:
Zaa y na ajụjụ ị na-ajụ ka ịga n'ihu na ndị dị mkpa ga-arụnyere.
Can nwere ike ugbua rụọ ọrụ ọhụrụ gburugburu ebe obibi ịmalite ịrụ ọrụ na ịnụ ụtọ ...
Ugbu a na anyị nwere ihe niile arụnyere na ịrụ ọrụ, ị nweelarị ike ịchọpụta ike na ntụgharị nke nnabata VPS na-enye dị ka nke anyị gosiri gị na Clouding. Anaconda bụ naanị otu ụdị ngwa na ngwaọrụ dị iche iche ị nwere ike iwunye ma jiri. Ọ bụghị ihe niile na-agbadata ịmepụta weebụsaịtị. Enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike iji VPS maka. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị na-ahapụ ikwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Etu esi etinye Anaconda na VPS
Kubeflow: Ngwaọrụ Ngwaọrụ Ngwaọrụ maka Kubernetes
Mahadum nke Minnesota amachibidoro mmepe Linux kernel